TIFF 2021: 'Dashcam' dia fitsangatsanganana mampihetsi-po mampihetsi-po
Home Sarimihetsika mahatsiravina TIFF 2021: 'Dashcam' dia fitsangatsanganana mampihetsi-po mampihetsi-po
Sarotra ny mijery, fa tsy afaka mijery lavitra ianao
by Kelly McNeely Septambra 12, 2021
by Kelly McNeely Septambra 12, 2021 657 hevitra
Nanjary tompon'ny horohoro vaovao ny talen'ny Rob Savage. Ny horonantsariny dia mamolavola tahotra amin'ny fanapahan-kevitra tapa-kevitra; manangana fihenjanana izy, mamoaka azy amin'ny fihomehezana maivana, ary manosika ny fampitahorana mitsambikina mahomby izay - na dia antenaina aza - dia gaga tampoka. Miaraka amin'ny sarimihetsika voalohany, Host, Savage dia namorona horonantsary mampatahotra horonan-tsary mampientanentana izay nalaina sary an-tsary ny Zoom nandritra ny fanidiana COVID-19 lehibe tamin'ny taona 2020. Ny fanarahan-dia vokarin'i Blumhouse, Dashcam, fampihorohoroana mivantana avy any amin'ny ala alokaloka any Angletera.
Dashcam manaraka ny streamer an-tserasera izay miteraka nofy ratsy tsy mijanona. Ao amin'ny horonantsary, dj dashcam freestyle iray antsoina hoe Annie (nolalaovin'i mpitendry zavamaneno tena fiainana Annie Hardy) mandao an'i LA hitady fialan-tsasatry ny areti-mandringana any London, nianjera teo amin'ny tranon'ny namany iray sy bandy teo aloha, Stretch (Amar Chadha-Patel). Ny fihetsik'i Annie manohitra ny fahalalahan-tanana, ny fitifirana vitriol, ny fihetsiky ny MAGA izay manosika ny sakaizan'i Stretch amin'ny fomba diso (tsy takatra), ary ny marika fisafotofotoana manokana dia manimba kokoa noho ny tsara. Nahita fiara izy ary nandehandeha teny amin'ny araben'i Londres, ary notolorana valizy hitondrana vehivavy iray antsoina hoe Angela. Manaiky izy, ary manomboka ny fitsapana mahazo azy.
Annie dia toetra liana. Izy dia sady manintona no maharikoriko, mailaka ary be saina. Ny zava-bitan'i Hardy dia mandeha amin'ny tadin-dokanga amin'ny tanjaka mahery setra; Annie (toetra amam-panahy) dia - indraindray tsy azo ekena. Fa misy zavatra momba azy izay tsy hainao ny mitsahatra tsy mijery.
Miharihary - araka ny nohazavaina tamin'ny fampidirana mialoha ny fijerena an'i Savage - tsy nanana script (amin'ny heviny hentitra amin'ny fifanakalozan-kevitra an-tsoratra) ilay sarimihetsika, noho izany ny zotram-pifanakalozan-kevitr'i Annie (raha tsy tanteraka). Na dia i Hardy aza dia mety manana zavatra inoana vitsivitsy, ny Annie of Dashcam dia dikan-teny mihoapampana momba ny tenany. Milaza izy fa mpisoloky i COVID, mivezivezy any amin'ny “feminazis” sy ny hetsika BLM, ary manimba ny fivarotana iray rehefa avy nangatahana nanao sarontava izy. Izy… karazana mahatsiravina.
Safidy mahaliana sy feno fahasahiana io, mametraka ny sarimihetsika eo am-pelatanan'ny toetra amam-panahy iray izay mahatsiravina. Manampy an'i Annie fa maranitra izy, ary mpitendry zavamaneno manan-talenta manana kanto ho an'ny lyricism mazava eny an-toerana. Mahita topimaso vitsivitsy momba an'io izahay amin'ny alàlan'ny sarimihetsika, saingy rehefa nahazo ny zotram-piainan'i Hardy hatramin'ny farany dia tena nahita azy tamin'ny singa nataony izahay. Ny mahavariana dia ny Band Car - ilay seho Annie avy amin'ny fiarany - raha ny marina seho tena izy amin'ny Happs miaraka amin'ny mpanaraka 14k mahery. Izany, raha ny marina ahoana no nahitan'i Savage azy. Voasarika tamin'ny karisma tokana ananany sy ny sainy tampoka izy, ary nieritreritra fa ho mamiratra ny manary kinova an'io amin'ny tranga mahatsiravina.
Raha miresaka an'i Annie amin'ny maha-mpilalao azy, dia endriny hyperbolized amin'ny fiarahamonina sociopolitical manokana izy, ary azo antoka fa hiteraka fisarahana eo amin'ny fihetsika manoloana ilay sarimihetsika. Fa raha misy ny karazana mamela ny mpizara sarimihetsika hitarika dia mampihoron-koditra izany.
Dashcam angamba mety ho hita amin'ny efijery kely kokoa, na farafaharatsiny, avy any amin'ny laharana vitsy any aoriana izay lehibe. Matahotra matetika ny camerawork - tena mikororosy - ary ny hetsika fahatelo amin'ilay sarimihetsika dia nizara ho amin'ny sasany amin'ireo camerawork mikorontana indrindra tsy hitako. Na eo aza ny lohateny dia miala matetika ny fakantsary. Nihazakazaka, nandady ary nifatratra tamin'ny fakantsary teny an-tànany i Annie, ary mety ho sarotra ny mamantatra izay tena mitranga.
Ny lafy ratsy lehibe dia ny fahitana ny ankamaroan'ny sarimihetsika sarotra jerena, noho ilay camerawork mihozongozona loatra. Raha nifikitra tamin'ny hevitra dashcam izy io - to the Spree - ho mora kokoa ny hanaraka azy, fa io koa dia ho very ny bikan'ny manika izay mandrehitra ny afon'ilay sarimihetsika.
Ny singa iray izay nankasitrahako izay fantatro fa hahasosotra ny mpijery sasany dia ny hetsika fa tsy voafaritra. Tsy tena fantatsika izay mitranga na ny antony. Ho fiarovana ny teti-dratsy mahavariana dia ahafahana manovaova be dia be ary manome ambaratonga hafahafa hafahafa amin'ireo tranga.
Raha ampidirina amin'ny toe-javatra mampatahotra ianao, inona no mety ho sendra anao amin'ny rakipeo audio sasany izay manazava ny antsipirihany sy manazava ny zava-nitranga rehetra hitanao. Na koa maka fotoana handinihanao boky na lahatsoratra vao hitanao ianao, na hanontanianao vavolombelona amin'ny fahalalana akaiky ny zava-mitranga. Tsy dia azo inoana izany, hoy aho. Amin'ny lafiny sasany, io fisafotofotoana sy tsy fitoviana io no mahatonga ny tsy tena izy ho marina kokoa.
Misy fotoana tena tsara amin'ny tifitra be loatra izay tena mampientam-po sy tena tsara amin'ny famoronana tahotra mahomby. Savage dia tia mampatahotra mitsambikina tsara, saingy ny fanamafisana dia tsara Eto. Fantany izay ataony, ary nosintominy tsara izy ireo.
raha Host nampiseho fifandraisana akaiky tao an-trano, Dashcam mamelatra ny tongony somary misimisy kokoa amin'ny alàlan'ny fivoahana amin'izao tontolo izao sy ny fizahana toerana maro, samy hafa creepier noho ny farany. Miaraka amin'ny fanohanan'ny mpamokatra karazany Jason Blum, Savage mampihena ny vokadratsy lehibe kokoa noho ny mpandefitra Host-era fanidiana ny vidin'ny-tenanao. Amin'ity maha-voalohany ny a fifanarahana misy sary telo miaraka amin'i Blumhouse, liana aho mahita izay ho aviny manaraka satria misokatra bebe kokoa izao tontolo izao.
Dashcam tsy hisarika ny olona rehetra. Tsy misy sarimihetsika. Saingy ny fihetsika Savage-to-the-metal manoloana ny horohoro dia mampientam-po ny mijery. Araka ny Dashcam maka ny hafainganam-pandeha, dia manidina tanteraka amin'ny lalamby ary miakatra amin'ny tahotra korontana tanteraka. Horonantsary fatra-paniry laza bebe kokoa ity miaraka amina protagonista mampisara-bazana sy horohoro mivelatra, ary tsy maintsy hitodika any ambony loha ity. Ny fanontaniana dia hoe, firy ny loha no hitodika.